ံHIV ရောဂါဖြင့် ဆုံးပါးသွားသူများအတွက် ဆီမီးထွန်း မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပွဲကို ဧရာဝတီ ရေဆိပ် သဲေ? - Yangon Media Group
ံHIV ရောဂါဖြင့် ဆုံးပါးသွားသူများအတွက် ဆီမီးထွန်း မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပွဲကို ဧရာဝတီ ရေဆိပ် သဲေ?
စစ်ကိုင်း၊ မေ ၂၂
မြန်မာနိုင်ငံရှိ HIV နှင့် အသက်ရှင်နေထိုင်သူများကွန်ရက်နှင့် ရွှေဇေယျာ (CBO)အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍ AIDS ဖြင့် သေဆုံးသွားသူများအတွက် အောက် မေ့သတိရဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပွဲကို မေ ၂၁ ရက်ည ၇ နာရီက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းမြို့ ဧမြဝတီရပ်ရေဆိပ်သဲသောင်ပြင် ပေါ်၌ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပွဲတွင် သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင် အသင့်ပြင်ဆင်ထားသည့်နေရာများ၌ ဖယောင်းတိုင်နှင့် ဆီမီးများထွန်းညှိကြကာ ဒေါက်တာအောင်ကျော်မျိုးနှင့် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက Candle Light Memorial ပြုလုပ်ရခြင်းများအားရှင်းလင်း ပြောကြားကြပြီး AIDS ဖြင့် သေဆုံးသွားသူများအားရည်စူး၍ စစ်ကိုင်းမြို့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ခရစ်ယန်ဘာသာနှင့်ဟိန္ဒူဘာ သာဝင်ဘာသာကြီးလေးခုတို့ကိုယ်စားပြုပုဂ္ဂိုလ်များမှ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာအလိုက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့အမှတ်တရစကားများပြောကြားကာ ဆုတောင်းပွဲတက်ရောက်လာသူများနှင့် အတူတစ်မိနစ်ငြိမ်သက် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ HIV နှင့်အသက်ရှင်နေထိုင်သူများကွန်ရက် နှင့်စစ်ကိုင်းမြို့ရွှေဇေယျာ (CBO) အဖွဲ့တို့အနေဖြင့် AIDS ရောဂါ ဖြင့် သေဆုံးသူများအတွက်ဆု တောင်းမေတ္တာပို့သပွဲကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ နှစ်စဉ်မေ ၂၁ ရက်ညတွင်ကျင်းပခဲ့ရာ ယခုနှစ် တွင်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပွဲကို ငါးကြိမ်မြောက်ကျင်းပခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
တိုက်ပွဲများ အတွင်း ပိတ်မိနေသော ပြည်သူများ အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရေး လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖမ်းဆီး??
မကွေး တိုင်းဒေသကြီး အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖိုရမ်ကော်မတီရုံး ဖွင့်လှစ်
မြန်မာတွင် အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံခြားသား အင်ဂျင်နီယာ အများစုသည် တရားမဝ
အီလီနွိုက်စ်ပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက်သေနတ်ပစ်ခတ်၍ ရဲတစ်ဦးသေဆုံး
တပ်မတော်နှင့် ပတ်သက်သည့် အရေးကိစ္စကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ တပ်မတော်ကသာ စီမံခန့်ခွဲရသြ??
လန်ဒန်မှာ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ပွဲကို သတိရနေတဲ့ အဆိုတော် ရီတာအိုရာ
စစ်ကိုင်းမြို့၌ ပထမအကြိမ် ကျောက်မျက်ရတနာအရောင်းပြပွဲကျင်းပမည်